एक्लो प्रयासमा दुई करोड पचास लाखको सहयोग – indepth.com.np
एक्लो प्रयासमा दुई करोड पचास लाखको सहयोग
वडा दसैं २०७७ को हार्दिक मंगलमय शुभकामना !
इन डेफ्ट ताजा अपडेट
इन डेफ्ट मासिक असार २०७६ अंक
इन डेफ्ट मासिक जेठ २०७६ अंक
POLITICS इन डेफ्ट
भक्तपुरको नमुना विद्यालय निर्माण
BUSINESS इन डेफ्ट
कति छ नेपालसँग विदेशी विनिमय सञ्चिति ?
इन डेफ्ट मासिक बैशाख २०७६ अंक
१३ असार २०७५, बुधबार २२:४२
मनकारी अनिता स्मिथ
नगरकोट । एक मनकारी जर्मन महिला अनिता स्मिथ गएको तीन वर्षदेखि नगरकोटमा सक्रिय रहँदै आएकी छन् । २०७२ सालको वैशाख १२ गते भूकम्प जाँदा नगरकोटमा रहेकी उनले यसपछि नगरकोट क्षेत्रमा मात्रै एक्लो प्रयासमा दुई करोड पचास लाख रुपैयाँको सहयोग गरिसकेकी छन् ।
नगरको क्षेत्रका भूकम्प पीडितलाई जस्तापाता, खानेपानी ट्यांकी, सिलाई मेसिन, बाख्रा, विद्यार्थीहरुलाई छात्रवृत्ति, पोशाकलगायतमा उनले उक्त रकमबराबरको सहयोग गरेकी हुन् ।
उनले बिहीबारमात्रै भक्तपुर र काभ्रे जिल्लाको सिमानामा रहेको नगरकोटस्थित महाँकाल माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययनरत सबै दुई सय ५१ विद्यार्थीहरुलाई ट्रयाक, जुत्ता मोजा सहयोग गरेकी छन् ।
मनकारी अनिताले प्रतिविद्यार्थी एक हजार एकसय पचास रुपैयाँ खर्च गरेर विद्यार्थीहरुलाई उक्त सहयोग गरेकी हुन् ।्
बिहीबार एक कार्यक्रमबीच उनले विद्यालयका प्रधानाध्यापक प्रेमकुमार बस्नेत र विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष तुलबहादुर तामाङलाई दुई सय ५१ थान ट्रयाक, सेतो जुत्ता र सेतै मोजा सहयोग हस्तान्तरण गरेकी छन् ।
उनले गत वर्ष पनि सोही विद्यालयमा अध्ययनरत तीनसय १३ जना विद्यार्थीहरुलाई एकएक जोर ट्रयाक, जुत्ता र मोजा सहयोग गरेकी थिइन् ।
अघिल्लो वर्ष जाडोको समयमा उक्त विद्यालय पुग्दा विद्यार्थीहरु कक्षा कोठाभित्रै कठ्याँगिएर बसेको देखेपछि सहयोग गर्न आफू अघि बढेको उनी सुनाउँछिन् ।
‘अघिल्लो वर्ष जाडोमा म नगरकोटमै थिएँ । त्यहीं बेला महाँकाल विद्यालय पुगेँ । त्यसबेला कक्षाकोठामा विद्यार्थीहरु जाडोले कठ्याँग्रिएर बसेको देखेँ’, अनिताले भनिन्, ‘अधिकांश विद्यार्थीहरु चप्पलमा थिए । छात्राहरु प्रmकमै थिएँ जसले गर्दा घुँडासम्म नांगै थियो । त्यो देखेर उनीहरुको लागि मैले केही गर्नुपर्छ भन्ने सोचेर न्यानो लुगा सहयोग गरेकी हुँ ।’
उनले गत वर्ष दिएको लुगा अहिलेसम्म विद्यार्थीहरुले जतनसाथ लगाइरहेको देखेर आफूलाई आत्मसन्तुष्टि र खुसी मिलेको सुनाइन् ।
‘विद्यार्थीहरुलाई न्यानो लुगा र जुत्तामोजा दिएपछि विद्यालय समयबाहेक अरुबेला पनि त्यहीं लुगामा देख्दा मलाई आनन्दको अनुभूति भयो’, उनले थपिन्, ‘उनीहरुको अवस्था देख्दा साँच्चै उनीहरुलाई सहयोग आवश्यक थियो । त्यहीं भएर हामीले पनि खुला हृदयले सहयोग ग¥यौं ।’
उनका अनुसार यस वर्ष विद्यार्थीहरुलाई ट्रयाक र जुत्तामोजा सहयोग गर्न जर्मनीसागै न्यूजील्याण्ड, फ्रान्स, बेलायतलगायतका ८० जनाले सहयोग गरेका छन् । उनले सहयोगीहरुलाई उनले दिएको सहयोगको सही सदुपयोग भएको प्रमाणस्वरुप ट्रयाक सुट र जुत्तामोजा लगाएको फोटो पठाउने सुनाइन् ।्
‘नेपालमा धेरै एनजीओ र आईएनजीओले ल्याएको सहयोगको सही सदुपयोग नभएको साथीहरुले गुनासो गर्नुहुन्छ’, अनिताले भनिन्, ‘त्यसैले उनीहरुलाई विश्वास दिलाउन सहयोग पाउनेहरुको फोटो नै पठाउने गर्दै आएका छौं । जुन फोटो देखेर फेरि फेरि सहयोगको मौका दिन अनुरोध गर्नुहुन्छ ।’
विद्यालयका प्रधानाध्यापक बस्नेतले अनिता स्मिथको निरन्तरको सहयोगले विद्यालयमा आउने विद्यार्थीहरुको संख्या धेरै घट्न नपाएको सुनाए ।
निजी स्कुलले धेरै प्रलोभन दिँदा पनि यहाँ विभिन्न दाताहरुबाट केही न केही सहयोग आइरहने भएकाले अभिभावकहरुले आफ्ना बच्चा अन्त नपठाएको उनको भनाइ थियो ।
उनले विद्यार्थीहरुको लागि खानेपानी समस्या रहेकाले फिल्टरसहितको खानेपानीको व्यवस्थासमेत छिटोभन्दा छिटो गरिदिन अनुरोध गरिन् ।
अनिताले बुधबारमात्रै स्वरोजगारमार्फत आर्थिक उपार्जनमा सहयोग पु¥याउने गरी नगरकोट क्षेत्रकै २५ महिला तथा पुरुषलाई एकएक थान सिलाइ मेसिन सहयोग गरेकी छन् ।
त्यस्तै नगरकोटकै २९ दलित घरपरिवारलाई एकएक वटा बाख्रा सहयोग गरेकी छन् । उक्त संख्या गरी भूकम्पपछि हालसम्म चारसय पचास वटाभन्दा बढी बाख्र्र्रा वितरण गरिसकिएको उनले सुनाइन् ।
भूकम्पको समयमा नगरकोटमै रहेकी अनिताले त्यसबेला भूकम्प पीडितहरुको अवस्था देखेर आफूलाई भाव विह्वल बनाएको सुनाइन् । भूकम्प पीडितहरुको अवस्था देख्न नसकेर उनले उनीहरुको सहयोगार्थ जर्मनीमा हेल्फेन्डे हेन्डे मेन्ज नामक संस्था नै खोलेकी छन् । उक्त संस्थामार्फत नगरको क्षेत्रका आठ सय ६३ भूकम्प पीडितलाई एकएक बण्डल जस्तापातासमेत वितरण गरिसकिएको उनका नेपाली सहयोगी सेमन्तसुन्दर पोखरेलले जानकारी दिए ।
अनितासँग पोखरेलको भेट नगरकोटस्थित उनकै होटल इको होममा भेट भएको थियो । २०७२ सालको वैशाख १२ गते भूकम्प जाँदा अनिता नगरकोटमै थिइन् । त्यसैले उनले भूकम्प पीडित नेपालीहरुको अवस्था धेरै नजिकबाट हेर्न पाएको पोखरेल बताउँछन् ।
‘भूकम्पपछि अनिता एक्लैले करिब दुई करोड पचास लाख रुपैयाँको नगरकोट क्षेत्रका भूकम्प पीडितहरुलाई सहयोग गरिसकेकी छन्’, पोखरेलले भने, ‘भूकम्पको बेला घरपरिवार स्वदेश फर्कन तारन्तार गरेको आग्रहलाई लत्याएर उनले उल्टै नेपालका भूकम्प पीडितहरुलाई सहयोग पठाउन आग्रह गर्दै नेपालमै बसिरहिन् ।’
उनका अनुसार अनिता प्रत्येक तीनतीन महिनामा नेपाल–जर्मन ओहोरदोहोर गर्छिन् । नेपाल आउँदा उनी कहिल्यै खाली हात आउँदिनन् । गएको अप्रिलमा नेपाल आउँदा उनले १२ हजार युरो लिएको आएको अनिताले बताइन् ।
उनका अनुसार उनी अर्को बिहीबार जर्मन फर्कँदैछन् । त्यसपछि सेप्टेम्बर महिनामा फेरि सहयोग लिएर आउने उनले वाचा गरेकी छन् ।
मोडलिङको ब्राण्डिङ गर्न क्याट वल्क